Nepali Rajneeti | देउवा भन्दा केपी ओली नै राम्रोः रामचन्द्र पौडेल
अषोज २६, २०७८ मंगलबार ५३ पटक हेरिएको
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका सभापति एमं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ओलीले भन्दा नराम्रो कार्य गर्न थालेको आरोप लगाएका छन ।
सत्ता र शक्तिको लो’भमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई यो हाल’तमा पुर्‍याएको आ’रोप लगाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस भरतपुर नगरसमितिले सोमाबार आयोजना गरेको विजया दशमी तथा तिहारको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले पार्टी सभापति देउवाले सत्ता, शक्ति र पदको लो’भमा अरु केहि नदेखेको बताए ।
‘स’त्ता र पदभन्दा अरु केही पनि नदेख्ने । जे मन लाग्यो त्यही गरेर आज पार्टीलाई यो हालतमा पुर्‍याइएको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नै निर्णय पटकपटक फिर्ता लिएर तमासा देखाएको पौडेलले बताए ।
‘निर्णय गरेर फिर्ता लिने कुन त’मासा हो रु कांग्रेसको इज्जत कहाँ पुगेको छ रु प्रति’ष्ठा कहाँ पुगेको छ रु कांग्रेसको इज्जत र प्रतिष्ठामा खेल’वाड गर्न के सभापतिलाई अधिकार छ रु’, उनले प्रश्न गरे ।
देउवाले केपी ओलीकै शैलीमा पार्टी फुटाउने अ’ध्यादेश फिर्ता लिएको र प्रधानन्यायाधीसको कोटामा नियुक्त मन्त्रीको नियुक्ति फिर्ता लिएको उनले बताए ।
आज निर्णय गरेर भोलि फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेस आफुले नचा’हेको उनले बताए । कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई हँसिय हथौडा र सूर्यमा भोट हाल भनेर भन्न नपरोस् भन्ने आफुले चाहेको उनको भनाइ थियो । ‘सबै कांग्रेस कार्यकर्ताले रुख चिह्नमा भोट हाल्न पाउन । त्यो कांग्रेस हामीलाई चाहिएको हो’, उनले भने ।
‘अहिले तपाईंहरूले भन्नुभयो, कहिले सूर्यमा भोट हाल्नुपर्ने । कहिले हँसिया हथौडामा भोट हाल्नुपर्ने । कहिले हलोमा भोट हाल्नुपर्ने । यो ‘बिडम्बना कहाँबाट सुरु भयो ? साथीहरुलाई भन्न चाहान्छु, १३औँ महाधिबेशनको ग’ल्तिबाट आज यो अवस्थामा गुज्रि’एको हो कि होइन रु’, उनले पुनः प्रश्न गरे ।
आगामी १४औँ महाधिबेशनमा कार्यकर्ताले नेताहरुको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान नेतृत्वले कांग्रेसलाई विच’लित गर्ने र कार्यकर्तालाई गैरकांग्रेसी चरित्रतर्फ ध’केल्ने प्रयास गरेको बताउँदै उनले देशमा अझै पनि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता नभएको बताए ।
‘अझै पनि लोकतन्त्रको सुनिश्चि’तता भएको छैन । १५ वर्षअघि राष्ट्रपतिमा न’थन्किने भनेर गरेको निर्णय अहिले आएर सहि सावित भएको छ । अझै लडा’इँ ल’ड्न’ जरुरी छ’, उनले भने । सही नेतृत्व छान्नका लागि कार्यकर्ता सामु परीक्षाको घडी आइपुगेको उनले बताए । यो खबर दैनिक न्युज नेपाल मा छ । यो पनि पढनुस काठमाडाैं ।
सरकारले सबै सेवाका कर्मचारीको साउन १ गतेबाट नयाँ तलबमान लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवा, सेना प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि सो तलबमान लागू हुने बैठक पछि कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
बजेटमा २ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि साउन १ गतेदेखि माध्यमिक तह ए ग्रेडकाे शिक्षककाे तलब अब ५९ हजार २ सय ५६ रूपैयाँ पुगेकाे छ । द्वितीय श्रेणीकाे शिक्षककाे तलब ५३ हजार ६ सय ८४ रूपैयाँ पुगेकाे छ शुरू तलव स्केल भने ४२ हजार ३ सय ८० रूपैयाँ हुन्छ ।
मा वि तह कै तृतीय श्रेणीकाे शिक्षककाे शुरू तलव स्केत ३७ हजार ९ सय ९० र जम्मा तलव ४८ हजार १ सय २६ हुन्छ ।कति हुन्छ नेपालमा सरकारी शिक्षककाे तलब ? नयाँ तलब स्केल सूचीसहित
त्यस्तै निमावि तह प्रथम श्रेणीकाे तलव ५० हजार ५ सय २० हुन्छ भने शुरू तलब ३९ हजार ८ सय रहेकाे छ । द्वितीय श्रेणीका शिक्षककाे तलब ४८ हजार१ सय २६ शुरूकाे तलब स्केल ३७ हजार ९ सय ९० हुन्छ ।निमावि तह कै तृतीय श्रेणीकाे शिक्षककाे अब नयाँ तलब ३८ हजार २ सय ५६ हुन्छ भने शुरू तलब स्केल ३० हजार २ सय हुन्छ ।
प्रावि तहमा प्रथम श्रेणीका शिक्षककाे अबकाे तलब ४८ हजार १ सय २६ हुन्छ । एसएलसी उतीर्ण तृतीय श्रेणी शुरू तलब स्केल २८ हजार ६ सय १० रूपैयाँ हुन्छ । शिक्षक तलब बारेकाे विस्तृत तलकाे तालिका प्रस्तुत छ ।
रामकुमारी झाँक्री- जसलाई अधिक गाली गरिन उनैबाट सपथ लिनुपर्यो !